Akụkọ - Infinitus Plaza
Aluminom uko ụlọ
Ihe a pịrị apị
Mmanụ acomụ panel
Ebube mabul oyuyo
Punching nkà panel
UV-ebi akwụkwọ obubọk
Ogwe ọka osisi
Guangzhou Infinitus Plaza dị na Baiyun New Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. Ọ bụ onye na-ewu ewu n'elu ụwa na onye a ma ama, nke a maara dị ka "Queen of curves" - bụ Zaha Hadid, mere ya.
Infinitus Plaza na-ejikọ mpaghara abụọ ahụ n'ụdị usoro "mgbaaka na-enweghị ngwụcha", dị ka "∞", ọ gbara ogige dị n'etiti gburugburu ka ọ mepụta ebe nkwukọrịta mepere emepe ma webata ọtụtụ ọkụ ọkụ sitere n'ime, nke ahụ dị mma maka gburugburu, nchekwa ike na nso okike.
A na-enye ụlọ ọrụ mgbidi ụlọ aluminium maka Infinitus Plaza ụlọ ọrụ anyị --- Yingjiwei ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Ngwongwo aluminom maka plaza bu 3003 H24 na 5083. Iji mee ka ogwe osisi di nma, achoro uzo nke facade iji 4.0mm na 5.0mm aluminom di elu. Nlekọta ihu nke PVDF mkpuchi mkpuchi ọtụtụ maka ogwe niile na-egbochi nke sitere na mmiri ozuzo acid, oyi na ihu igwe ọkụ, ma hụ na ngwaahịa na-adịgide adịgide ma na-adị mma.
Ihe odide ya, ihe okike ya na njikwa njikwa ogo ya na-eme ka o sie ike nhazi aluminom, ma na-agbasoghị àgwà, nyocha na ịrụsi ọrụ ike mgbe niile, anyị mechara mezie nsogbu ndị ahụ n'otu n'otu. Iji gosipụta ikike anyị nwere imepụta, imesi ike na ịdị mma na ezi obi nye ndị ahịa, anyị na-ekewapụkwa otu usoro mmepụta ọhụụ maka ọrụ a. Nanị ndị ahịa, usoro ntinye nke onwe, ndị otu nzaghachi ngwa ngwa maka imepụta, imepụta na nsogbu nrụnye saịtị, ndị otu Zaha Design Institute na ndị ahịa nabatara ma too ha.
Guangzhou Infinitus Plaza oru ngo a ga-agwụ, ọ ga-aghọ akara ngosi ọhụụ nke Guangzhou na otu n'ime ọrụ pụtara ìhè n'ụwa.
Banyere ụlọ ọrụ anyị, anyị dị njikere maka ịma aka ọhụụ maka ọrụ ọ bụla, nsogbu agaghị eti anyị ihe, mana nyere anyị aka ịbawanye ike ma dị ike. Ebee ka uche dị, n'ebe ahụ ka Yingjiwei dị.
Post oge: Mar-24-2021
Onye isi obodo Dingxi, Gansu Province ...
Lọ ọrụ: Foshan City Nanhai Yingjiwei Aluminium Materiallọ ihe onwunwe Co., Ltd.
Adreesị: Nke 1, Hejing South Road, Usoro 1, Hegui Ind. Mpaghara, Heshun, Lishui Town, Nanhai Dist., Foshan, Guangdong, China
Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Ngwaahịa niile